China In-Ground GL166 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Eurborn
အလယ်အလတ်မျက်နှာပြင်ကရိယာဖြစ်သော CREE XPE (6pcs LED) အထုပ်နှင့် 10/40 ဒီဂရီ bean ရွေးချယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ဖန်ခွက်၊ အဏ္ဏဝါအဆင့် ၃၁၆ သံမဏိတည်ဆောက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော tolP68. လျှို့ဝှက်ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်သို့စက်မှုအဆစ်မရှိသောရေအရင်းအမြစ်မှစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆစ်များသည်ရေကိုကာကွယ်မှုအားသေချာစေသည်။ ထိတွေ့အပူချိန်လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီအောင် .product သည်အေးမြပြေး။ Inline 350mA ယာဉ်မောင်းရွေးချယ်မှုများတွင် switched, mains, 1-10V နှင့် DALI dimmable solutions lum 6W wattage ၆၀၀ luminous ပါဝင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားမှာ 96x47mm ဖြစ်သည်။ LED အပြင်ဘက်မီးများကိုမြက်ခင်းများ၊ ဝင်းဝင်းမီးအလင်းရောင်၊ ထုတ်ကုန်၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ခိုးယူခံရခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်တစ် ဦး ချင်းစီဝက်အူအပေါက်ဒီဇိုင်း။ ဒါက radial light-emitting lamp တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီမီးခွက်၏ပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ မာကျောသောဖန်ထည်သည်အလင်းအားထုတ်လွှတ်ရာတွင်အားကောင်းစေသည်။
Ottics S1O ° / F40 °
ခွင့်ပြုချက် CE.RoHS, IP ကို
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -2O ° C2+ 45 ° C
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (optional) ဟုတ်တယ်
လျှောက်လွှာများ မိုးလုံလေလုံ / အပြင်ပိုင်း၊ ရှုခင်း၊
GL166 အခမဲ့ CW.WW, NW၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ပယင်း S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်း 350mA စီးရီး 3M 2X0.75mm²ကေဘယ်လ် 6W 600LM D96X47 D85
GL166D အခမဲ့ CW, WW, NW၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ပယင်း S10 / F40 Constantvoltage 24VDC စင်ပြိုင် 3M 2X0.75mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ 600LM D96X47 D85
GL166RGB အခမဲ့ 2R + 2G + 2B S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်း 350mA စီးရီး 2x3M 4X0.5mm²ကေဘယ်လ် 6W N / A D96X47 D85
GL166DMX-RGB အခမဲ့ 2R + 2G + 2B S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController စင်ပြိုင် 1.1M4X0.5mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ N / A D96X47 D85
GL166DMX-RGB အက်ဒီဆင် RGB (ရောင်စုံ) S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController စင်ပြိုင် 1.1M4X0.5mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ N / A D96X47 D85
GL166DMX-RGBW အက်ဒီဆင် RGBW (ရောင်စုံ) S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController စင်ပြိုင် 1-1M4X0.5mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ N / A D96X47 D85
built အတွက် DMX ဒီကုဒ်ဒါ * IES ကို Data.support ။
ရှေ့သို့ အလင်း PL021 အစက်အပြောက်
နောက်တစ်ခု: In-Ground GL150
2. LED မီးအရင်းအမြစ်သည် CREE အမှတ်တံဆိပ်ကိုလက်ခံသည်။ CREE သည်ဈေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေသည့်အလင်းရောင်တီထွင်သူနှင့်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ Chip ၏အားသာချက်မှာသေးငယ်သောနေရာတွင်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးနိုင်သောဆီလီကွန်ကာဗိုက် (SiC) ပစ္စည်းမှရရှိသည်။ အခြားရှိပြီးသားနည်းပညာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များသည်အပူလျော့နည်းစေသည်။ CREE LED သည်အလွန်စွမ်းအင်ထိရောက်သော flip-chip InGaN ပစ္စည်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ G ·SIC®အလွှာများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးမြင့်မားသောနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော LEDs များသည်အကောင်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုရရှိစေသည်။